"Efa renareo fa voalaza hoe: “Maso solon’ny maso, ary nify solon’ny nify”. Fa Izaho (Jesosy) kosa milaza aminareo hoe: Aza manohitra izay manisy ratsy anao; … izay te hiady aminao ka ta haka ny akanjonao, dia avelao ho azy koa ny lambanao… Tiava ny fahavalonareo … mba ho tonga zanaky ny Rainareo Izay any an-danitra ianareo."Matio 5:38-45
Efa madiva haraina vao tafody ny evanjelista Dapozzo, rehefa tsy teo nandritra ny andro maromaro. Tazany teo anoloan’ny trano fa nisy lehilahy vitsivitsy, somokotra mangalatra ireo hazo fisaka tsara tarehy izay naha sarotiny azy. Ny hiantso polisy no tonga voalohany tao an-tsainy. Saingy nieritreritra tampoka izy hoe : ireo mpangalatra ireo dia manana fanahy, sarobidy kokoa noho ny hazo ! Feno fitiavana azy ireo i Dapozzo, ka nanatona ary nanolo-tena hanampy. Tsy nanampo velively izy ireo hoe io no tompon’ny hazo, ka dia nanaiky na dia somary gaga aza. Nofidin’i Dapozzo ho azy ireo izay hazo fisaka tsara indrindra. Rehefa feno hipoka ny fiara, dia nasainy hiala hetaheta izy ireo. Narosony ny ranom-boankazo tsara indrindra, tao anaty vera tsara indrindra nananany. Nony farany, dia nohazavainy tam-pahatoniana hoe iza izy, ary nolazalazainy tamin’izy ireo ny momba ny Mpamonjiny. Nasainy hiverina ao aminy izy ireo, hihaino ny Filazantsara…
Lasa ny enina ambin’ny folo taona, raha niverina ny iray tamin’ireo mpangalatra. Nihaino ny Filazantsara izy, ary nanaiky ny hafatra momba ny fahasoavan’Andriamanitra. Very hazo fisaka i Dapozzo, saingy nahazo fanahy iray ho amin’ny mandrakizay. Tsy nisy nanenenany izany!
Valo ambin’ny folo taona tat? aoriana, tsy nanam-bola i Dapozzo, nefa tokony hanorina trano honenan’ny ankohonany. Saingy tsy nisy izay nilaina teo am-pelatanany… Tamin’izay dia nisy namana iray, nandefa ho azy hazo fisaka tsara tarehy, ao amin’ny ilàny azy indrindra. Tsy hadinon’Andriamanitra ny nahafoizan’i Dapozzo ireo hazo fisaka. Nisy fanahy sarobidy iray voavonjy, ary tsy very na inona na inona i Dapozzo tao anatin’izany!